Vols kubva kuTurkestan kuenda kuBishkek, Kazakhstan - Kyrgyzstan kubatana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kubva kuTurkestan kuenda kuBishkek, Kazakhstan - Kyrgyzstan kubatana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • Kyrgyzstan Breaking Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chinangwa cheiyi nzira nyowani ndechekubatanidza iyo tsika tsika yenyika yeTurkic - iro guta reTurkestan senzvimbo yekusimudzira yekushanya paGreat Silk Road nenyika dzekunze.
FlyArystan inotangisa nzira nyowani yepasi rese kuenda kuKyrgyzstan
FlyArystan kubhururuka kubva kuKazakhstan kuenda kuBishkek kaviri pasvondo
FlyArystan inoshandisa ndege dzeAirbus A-320 munzira itsva
Bazi rezvemaindasitiri nekusimudzirwa kwezvivakwa zveKazakhstan rakazivisa kuti mutakuri anodhura weKazakhstan FlyArystan yakavhura nzira nyowani yepasi rose nekutangisa kweTurkestan kuenda kuBishkek ndege.
FlyArystan ichatiza ndege yeTurkestan, Kazakhstan-Bishkek, Kyrgyzstan kaviri pasvondo ichishandisa ndege yeAirbus A-320.
Yekutanga nendege avhareji zvigaro zvekugara zvakafungidzirwa pamusoro pe60% muna Chivabvu 31
Chinangwa cheiyi nzira nyowani ndechekubatanidza guta retsika renyika yeTurkic - guta reTurkestan senzvimbo yekusimudzira yekushanya paGreat Silk Road nenyika dzekunze, vakuru vevashandi veKazakh vakati.
Nendege dzichaitwa zvakanyatsoenderana nemitemo yehutsanana yezvirwere uye maererano neshedhiyo pane webhusaiti yendege.
FlyArystan inendege yakaderera mutengo inogara muAlmaty, Kazakhstan. Ndiyo yakazara muridzi wemutengo wakaderera weAir Astana, ndege inotungamira yenyika. FlyArystan hwaro hwakatenderwa nevamiriri vemasangano eAir Astana, Samruk-Kazyna Changamire Wealth Fund uye BAE Systems PLC, uye yakatsigirwa neMutungamiriri weKazakhstan Nursultan Nazarbayev, musi wa2 Mbudzi 2018.